ဆက်သွယ်ရန် - eGay ဆိုင်
သင်ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကအလိုအလျှောက်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကို, အိုင်ပီလိပ်စာ, အချိန်ဇုန်, သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသော cookies များကိုအချို့နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်သင့်ရဲ့ device ကိုအကြောင်းကိုအချို့သောသတင်းအချက်အလက်, စုဆောင်းပါ။ သင်ဆိုက်ကို browse အဖြစ်ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဆိုက်ကိုရန်သင့်အားရည်ညွှန်းသောအရာကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများ, သင်ကြည့်ရှုသောတစ်ဦးချင်းစီကို web စာမျက်နှာများတွင်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း, သင်ဆိုက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "စက်ပစ္စည်း Information" ဆိုတဲ့အတိုင်းဤသည်အလိုအလျောက်-ကောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ကိုကိုးကားပါ။
ကျနော်တို့ကအောက်ပါနည်းပညာများကို အသုံးပြု. စက်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း:
- "ကွတ်ကီး" သင်၏ကိရိယာသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာနေရာချစကာနှင့်မကြာခဏအမည်မသိထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားကိုထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်းဒေတာဖိုင်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ပိုပြီး cookies တွေကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်မည်ကဲ့သို့ cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့အဘို့, http://www.allaboutcookies.org သွားရောက်ကြည့်ရှု။
- "Log in ဝင်ရန်ဖိုင်တွေ" လမ်းကြောင်းလုပ်ရပ်များဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်, သင်၏ IP လိပ်စာကို, browser ကိုအမျိုးအစား, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေး, ရည်ညွှန်းပြီး / ထွက်ပေါက်စာမျက်နှာများ, နှင့်နေ့စွဲ / အချိန်တံဆိပ်ခေါင်းများအပါအဝင်ဒေတာစုဆောင်းပါ။
- "web beacons", "Tag", နဲ့ "pixels ကို" သင်ဆိုက် browse ကိုဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပြုအီလက်ထရောနစ်ဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။
သင်တစ်ဦးဝယ်ယူစေခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုဒ်မှတဆင့်ဝယ်ယူစေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အခါထို့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏အမည်, ငွေတောင်းခံလိပ်စာ, ရေကြောင်းလိပ်စာ, (ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်တွေအပါအဝင်) ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်အပါအဝင်သင့်ထံမှအချို့သောသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပါ။ ကြှနျုပျတို့သညျ "အမိန့်ပြန်ကြားရေး" အဖြစ်ဤအချက်အလက်ကိုးကားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် (သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက် processing ရေကြောင်းဘို့စီစဉ်များနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် / သို့မဟုတ်အမိန့်အတည်ပြုချက်ဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအပါအဝင်) ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ထားရှိဆိုအမိန့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်စုဆောင်းသောအမိန့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ဤအမိန့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ:
- အလားအလာအန္တရာယ်သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုဘို့ငါတို့အမိန့် Screen; နှင့်
- တဲ့အခါကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမျှဝေထားသောဦးစားပေးနှင့်အညီ, သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာနှင့်အတူပေး။
ကျနော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် browse နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထုတ်လုပ်အားဖြင့် (ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပိုကောင်းအောင်ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ငါတို့သည် (အထူးသဖြင့်, သင့်ရဲ့ IP လိပ်စာ) အလားအလာအန္တရာယ်နှင့်လိမ်လည်မှုများအတွက်မျက်နှာပြင်ကိုကူညီစုဆောင်းသောစက်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါနှင့် ဆိုက်, ငါတို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာကင်ပိန်း၏အောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်) ။
ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကို, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကိုသုံးပါကကူညီမှတတိယပါတီများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များမျှဝေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါတို့သည်ငါတို့၏အွန်လိုင်းစတိုးပါဝါမှ Shopify ကိုသုံးပါ - သင် Shopify ဒီနေရာမှာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပိုမိုဖတျရှုနိုင်သည် https://www.shopify.com/legal/privacy ။ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/: သင်က Google ကဒီမှာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပိုမိုဖတျရှုနိုငျသညျ - ငါတို့သည်လည်းငါတို့ဖောက်သည်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုဖို့ကိုမည်သို့နားလည်အထောက်အကူပြုရန် Google Analytics မှသုံးပါ။ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout: ကိုလည်းသင်ကဒီမှာ Google Analytics ၏-ဖယ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့သည်လည်းတစ်ဆင့်ခေါ်စာ, ရှာရမ်းသို့မဟုတ်ကျနော်တို့လက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်အခြားအရာကိုပြုသင့်သည်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများလိုက်နာရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များမျှဝေနိုင်ပါသည်။
အမူအကျင့် Advertising ကြော်ငြာ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်လျာထားသောကြော်ငြာများသို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်ယုံကြည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူသငျသညျများကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဘယ်လိုလျာထားသောကြော်ငြာခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင် http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work မှာကွန်ယက် Advertising ကြော်ငြာ Initiative ရဲ့ ( "NAI") ပညာရေးစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအောက်ကလင့်ခ်ကို အသုံးပြု. လျာထားသောကြော်ငြာခြင်းထဲကရွေးချယ်နိုင်သည်
- Facebook ကို: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- ဂူဂဲလ်: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing မှ: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
http://optout.aboutads.info/: ထို့အပြင်သငျသညျမှာဒစ်ဂျစ်တယ် Advertising ကြော်ငြာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ဘေးဖယ်ထုတ်ပေါ်တယ်သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဤဝန်ဆောင်မှုများတချို့၏ဖယ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုရဲ့ဒေတာစုဆောင်းခြင်းပြောင်းလဲနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဘရောက်ဇာကနေ Do Not Track ကို signal ကိုမြင်သောအခါအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးမပြုကြသတိပြုပါ။
သင်တစ်ဦးဥရောပနေထိုင်သူမှန်လျှင်, သင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူရန်နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်, တညျ့ updated, ဒါမှမဟုတ်ဖျက်ခံရသည်ဟုမေးမြန်းဖို့ခွင့်ရှိသည်။ သငျသညျထိုအခွင့်ကိုကငျြ့သုံးလိုပါလျှင်အောက်ပါဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးဥရောပနေထိုင်သူလျှင်ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် (သင်ဆိုက်မှတဆင့်အမိန့်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာများအတွက်) ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစေခြင်းငှါကန်ထရိုက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားကိုလိုက်နိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို processing ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ထို့အပြင်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကနေဒါနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်, ဥရောပပြင်ပတွင်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်သတိပြုပါပေးပါ။
ကျနော်တို့ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ရန်အတွက်ဥပမာ, အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေ့အကျင့်ရန်သို့မဟုတ်အခြား, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်အခြိနျမှနျမှဒီ privacy ကိုမူဝါဒအကို update လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်များအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်မေးခွန်းများကိုရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်တိုင်ကြားချက်လုပ်ချင်ပါတယ်သည်မှန်လျှင်, နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါလျှင် ဒီမှာ.
အခြို့သောအကွံဉာဏျလိုအပ်ပါသလား? သင့်ရဲ့အမိန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ဦးကမေးခှနျးက? တစ်ဖက်ဖြစ်လိုပါသလား? ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင်သည်ထူးမည်သတင်းစကားကိုပို့ပါ!
အမည် အီးမေးလ်ပို့ရန် အက်ဳိးအေၾကာင္း [Message]
ဤ box စစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်ဤပုံစံကိုတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, ငါသည်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုဤပုံစံပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောငါ၏အတောင်းဆိုမှုကိုများ၏အခြေအနေတွင်နောက်တဖန်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားကုသမှုငါ၏အသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပြုမိပါလိမ့်မည်။ ဤပုံစံအားဖြင့်စုဆောင်းအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုရန်သင့်သဘောတူညီခကျြ၏ရုပ်သိမ်းရေးအပါအဝင်သင့်ရဲ့အခွင့်အရေး, သိကြများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း, ငါတို့တိုင်ပင်ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ